प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभयो कामको फेहरिस्त : तथ्यमा यस्तो देखियो परिणाम (सम्बोधन पूर्णपाठ) « Janata Times
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्नो दल फगत सपनाका सौदागर नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सकियो, भत्कियो, अक केही हुन्न भन्ने मनस्थिति फेर्न र अब केही हुन्छ भन्ने जनतामा आशाको सञ्चार जगाउन आफू नेतृत्वको सरकार सफल भएको घोषणासमेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका लागि कतै जग हालेको र कतै पहिला वा दोस्रो तला थपेको बताउनु भयो ।
संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– खै त रेल, खै त पानी जहाज ? कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको ? अझै जोड दिएर सोध्न सकिन्छ– हामीलाई सपना किन देखाएको ? हामीलाई किन आशा जगाएको ?’ ओलीले आफ्ना प्रश्नको जबाफ दिंदै भन्नुभयो – म बिनम्रताका साथ स्वीकार्छु । हो, मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ । मैले भनेको हुँ – निदाएको बेलामा देख्ने सपना हैन, ब्युँझिएको बेलाको सपना देखौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधन जस्ताको तस्तै ।
– लामो संघर्ष र बलिदानपछि पाचबर्ष अघि आजकै दिन हामीले नेपालको संविधान जारी गरेका थियौं । जनताका आप्mनै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मुल कानुन–संविधान जारी गरी भएको यस ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म, नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट यहाँहरु सवैमा पाँचौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
– दशकौंसम्म संघर्षमा हेलिएकाहरु जसले पीडा झेलेका छन्/बुझेका छन, तिनका लागि आजको दिन गौरव गाथाले भरिएको दिवस हो । पारिवारिक विछोड, उत्पीडन र छटपटीबाट उन्मुक्ति पाएका सबै नेपालीहरुका लागि आजको दिन, स्वतन्त्रता दिवस पनि हो– प्राप्त उपलव्धीप्रति गर्व गर्ने उत्सव हो । त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रिय दिवस, न त फगत तामझाम हो, न आम जनतामा अरुची हुने निरङ्कुश शासकहरुको ‘उर्दी र तामेली’ जस्तो हो ।
– गएको वर्ष राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मैले आजको दिनलाई आधुनिक नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण ‘बेञ्च–मार्क’ भनेको थिएँ । संविधानका धारा र दफाहरुका बारेमा चर्चा गरेको थिएँ । संविधान प्राप्तिका लागि हामीले लडेको सात दशक लामोे संघर्ष र सफलतालाई सङ्क्षेपमा उल्लेख गरेको थिएँ । र, लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिको निष्ठा, गतिशीलता प्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ ।
– त्यतिखेर मैले संबिधानले आत्मसात गरेका हाम्रा राष्ट्रिय आकांक्षा र लक्ष्यबारे चर्चा गरेको थिएँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, पछि परेको नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न तपाईं÷हामीले संयुक्त रुपमा देखेको, पूरा हुने र पूरा गर्नै पर्ने सपना भएको उल्लेख गरेको थिएँ ।
– आज म ती प्रतिवद्धतालाई पुनः एकपटक दोहर्याउने अनुमति चाहन्छु । र, सरकार सञ्चालनको १८ महिनामा भएका उपलव्धिको संक्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
– ‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा २०७६ बैशाख १ गतेबाट शुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान अन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६ सय २२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ ।
– भूकम्पपछि वन्द भएको तातोपानी नाकावाट आयात निर्यात सुचारु भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लार्चा्स्थित सुक्खा वन्दरगाह यसै अबधिमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
– यस अवधीमा मुलुकका ७ हजार ३ सय ७७ हेक्टर थप भूभागमा वृक्षारोपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एकै वर्षमा मात्र ४ हजार १ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा वृक्षारोपण भएको छ । यो वृक्षारोपण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४१ प्रतिशत वढी हो । वृक्षारोपण भएका क्षेत्रमा फलफूलका मात्र ४५ लाख विरुवा रोपिएका छन् ।
– आम नागरिकको सुविधाको लागि विद्युतीय वस छिट्टै सञ्चालन हुँदैछ । सरकारले साझा यातायातमार्फत काठमाडौं उपत्यका र प्रदेशका मूख्य शहरहरुमा तीन सय वटा विद्युतीय वस खरीद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
– पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रति महिना ५ हजार रुपैंयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता अनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
– राष्ट्रिय दिवसको यस अवसरमा म फेरि प्रतिवद्धता जाहेर गर्छु, मुलुकले काँचुली फेर्छ, हाम्रा सपनाहरु पूरा हुन्छन– हुन्छन् । यस अभियानको नेतृत्वमा अहिले म छु ।
– धैर्य गरौं– अढाई शताब्दीदेखि खजमजिएको थिति, अढाई वर्ष नपुग्दै दुरुस्त किन भएन भन्ने जस्ता प्रश्नहरुमाथि एकचोटी पुनर्विचार गरौं ।
– तर मलाई थोरै चिन्ता केही फुर्स्दिलो युवा पंक्तिको पनि छ, जसको ऊर्जा रचनात्मक सिर्जनामा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा विना मुद्दाका विषयवस्तुमा हुने परिणामहीन बहसमा व्यतीत भइरहेको छ ।
– मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, आजको आवश्यकता उश्रृङ्खलता र अराजकता हैन, सामाजिक सद्भाव, आपसी एकता र सहिष्णुता हो । आजको लडाईं लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि हैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र सुदृढ गर्नका लागि हो ।
– प्रदेशको काम प्रभावकारी बनाउन वरिष्ट सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको सचिवका रुपमा खटाइएको छ । प्रोत्साहन र दण्डको प्रणाली स्थापना गर्न विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नतिको आधार प्रदेश सरकारको कामलाई पनि बनाउने नीति शुरु गरिएको छ । फाइल बढुवाबाट सिर्जना हुने अकर्मण्यतालाई अन्त्य गर्न उमेर वा नोकरीको जेष्ठता हैन कार्यकुशलतालाई प्राथमिकतामा राखिने छ । ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने आकांक्षामा आवस्यक निर्णय समेत नगर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
– यसै आर्थिक वर्ष्भित्र गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थल समेत सञ्चालनमा आउनेछ ।
– लोकतन्त्रको आधार जनता हुन, जनतासँगै लोकतन्त्रका संस्थाहरु पनि हुन् । जनता बलियो हुँदा लोकतन्त्रका संस्थाहरु बलियो हुन्छन् । ती संस्थाहरु बलियो हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली सदृढ हुन्छ । प्रणाली सुदृढ हुँदा आम जनतामा सेवा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्छ ।